Banijya News | » आहा रारा गोल्ड कप फागुन २२ देखि आहा रारा गोल्ड कप फागुन २२ देखि – Banijya News
आहा रारा गोल्ड कप फागुन २२ देखि
पोखरामा सञ्चालन हुने ‘आहा रारा गोल्ड कप’ फागुन २२ गते देखि शुरू हुने भएको छ । सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा १८औं संस्करणको उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको हो ।
यस वर्षको खेलमा विदेशी एकसहित १० टोली सहभागी हुने भएका छन् । खेलको पहिलो दिन आयोजक सहारा क्लब र ब्रिगेड ब्वाइज क्लब काठमाडौंबीच उद्घाटन खेल हुनेछ । त्यस्तै २३ गते नेपाल एपीएफ क्लब र झापा ११ बीच खेल हुनेछ ।
प्रतियोगितामा विजेता टोलीले १० लाख एक हजार र उपविजेताले पाँच लाख एक हजार पुरस्कार पाउने क्लबले जनाएको छ । त्यस्तै प्रतियोगिताको अनुमानित आम्दानी रू. १ करोड १८ लाख १ हजार र रू. ९९ लाख ३८ हजार ५०० खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतियोगिताबाट बचत हुने रकम क्लबबाट सञ्चालित सहारा एकेडेमीमा खर्च गरिने क्लबको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै सहारा क्लबले यस वर्ष राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सुजल श्रेष्ठलाई ‘सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान २०७६’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ ।
प्रतियोगिता आगामी चैत १ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।